मे 20, 2019 मे 20, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments मोबाइल, स्मार्टफोन
स्मार्टफोन (मोबाइल) मा सानो सानो समस्याले पनि कहिलेकाही हामीलाई दु:ख दिईरहेको हुन्छ । कहिलेकाही मोबाइलमा केहि समस्या आउन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल कुनै पसलमा बनाउन लानु बन्दा पनि घरमै बसेर बनाउने प्रयास गर्न सकिन्छ । मोबाइल एक्कासी बन्द भएमा मोबाइल प्रयोगकर्ताले जान्नैपर्ने ४ कुराहरु यस प्रकार छन् ।
१. फोन एक्कासी बन्द भएमा
कहिलेकाहि नयाँ वा पुरानो फोन एक्कासी बन्द हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उक्त मोबाइललाई प्लास्टिकले बेरेर फ्रीजभित्र हालेर केहि समयपछी फोन अन गर्न सकिन्छ । स्मार्टफोनको ब्याट्री लिथियम आयनबाट बनेको हुन्छ । तातो भएपछी यसले एक्कासी काम गर्न छाड्छ । त्यसैले कुल फ्रिजमा फोन राख्दा ब्याट्री पुरानै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । तर फ्रीजमा राख्दा फोनलाई राम्ररी प्लास्टिकले बेरेर राख्नुस नत्र फोन भिजन सक्छ । साथै १/२ घण्टा भन्दा धेरै बेर नराख्नुस ।
२. फोन पानीमा भिजेमा
फोन भिजेको छ भने तुरुन्त स्विच अन नगर्नुस् । साथै भिजेर पनि फोन खुल्लै छ भने स्विच अफ गर्नुस । यस्तो गर्दा फोनमा बिद्युत सर्ट हुन पाउंदैन । यदी ब्याट्री निकाल्न मिल्ने फोन छ भने तत्काल निकाल्नुस साथै सिम कार्ड, स्क्रीन गार्ड, मेमोरी कार्ड निकाल्नुस । फेरी कुनै कटनको कपडाले फोन पुछ्नुस । पुछीसके पछि फोन र ब्याट्रीलाई धान वा चामलभित्र दबाउनुस । धान वा चामलले फोनबाट छिट्टै पानि सोस्न मद्धत गर्छ । ८/१० घण्टापछी मोबाइल खोल्ने प्रयास गर्नुहुन्छ ।
३. फोन स्क्र्याच भएमा
यदि तपाइको फोनको स्क्रीन गार्ड छैन भने बिस्तारै स्क्राय्च हुन्छ । स्क्र्याच भएको भागलाई सफा गर्दा टुथपेस्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र नरम कपडाले बिस्तारै बिस्तारै पुछ्न सक्नुहुन्छ । यसले फोनको स्क्रीन सफा बनाउँछ ।
४. फोनको एप्लिकेशन क्र्यास भएमा वा ह्यांग भएमा
यदि तपाइ एप्लिकेशन डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसै समय तपाइको एन्ड्रोइड फोनको एप्लिकेशन क्र्यास भएमा वा ह्यांग भएमा नआत्तिनुस । यस्तो अवस्थामा फोनको ब्याट्री निकालीदिनुस् । फेरी ब्याट्री लगाएर फोनलाई रीस्टार्ट गर्नुस । रीस्टार्ट गरेपछि गूगल प्लेमा गएर तपाईलाई चाहिएको ऐप फेरी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ । यदी अपडेटको अप्सन नआएमा उक्त एप्लाई अनइन्स्टल गर्नुस र फेरी इन्स्टल गर्नुस । समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
← हस्तरेखा विज्ञान अनुसार हातमा हुने चक्र, शंख तथा भविष्य
एक्सरे किन गरिन्छ ? →
अप्रील 6, 2019 अप्रील 6, 2019 साइन्स इन्फोटेक 7
3 thoughts on “मोबाइल एक्कासी बन्द भएमा मोबाइल प्रयोगकर्ताले जान्नैपर्ने ४ कुराहरु”